भूमिगत रहेका रेशम चौधरी झण्डै २१ हजार मतान्तरले विजयी !
ARCHIVE, POLITICS » भूमिगत रहेका रेशम चौधरी झण्डै २१ हजार मतान्तरले विजयी !
कैलाली - कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका रेशम चौधरी बिजयी भएका छन् ।
राजपाका उम्मेदवार चौधरीले ३४ हजार ३४१ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् भने वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार मदन कुमारी शाह (गरिमा) ले १३ हजार ४०६ मत मात्र पाइन् । चौधरी र शाहबीचको मतअन्तर २० हजार ९३५ रहेको छ ।
कांग्रेसकी इश्वरी न्यौपाने ११ हजार २०३ मत प्राप्त गरि तेस्रो स्थान हासिल रहेकी छिन्। चौधरी कैलाली घटनाका मुख्य आरोपी हुन् र उनी प्रहरीको फरार अभियुक्तको सूचीमा छन् । उनले वारेसनामा मार्फत् उम्मेदवारी दिएका थिए ।
प्रकाशित : Tuesday, December 12, 2017